Khabar Kantipur » प्रमाण पुग्दा पनि एउटा घुस खोर थुनिदैन भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने मान्छे ‘गफाडी’ हो
प्रमाण पुग्दा पनि एउटा घुस खोर थुनिदैन भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने मान्छे ‘गफाडी’ हो
काठमाडौं। मुलुक भ्रष्टाचार हुने संसारका अन्य देशहरुमा कति अगाडि छ भनेर त भन्नै पर्दैन । देशका नेताले त प्राण गएपनि मान्दैनन्, सरकार र यसका मन्त्री प्रधानमन्त्री त भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ भन्ने भ्रममा छन् ।
जनतलाई पनि भ्रममा पार्नै प्रयासहरु बेला बखतमा गरिरहन्छन् । भ्रष्टाचारको सुई कुन तापक्रममा छ र पारो कति चड्यो भनेर हेर्ने भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सर्भेमा हो ।
विश्व विख्यत पत्याउन सकिने संस्थाहरुको रिपोर्टका आधारमा भन्दा हामी अझै चरम भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा अगाडि छौँ। लामो व्याख्या, आम मान्छेले बुझ्दै नबुझ्ने टिप्पणी गरेर नेशनल टेलिभिजनको अमूल्य समय र हेर्ने दर्शकहरुको त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण समय जोगाउँदै एउटा सीधाकुरा गरौं । यो मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर खोलिएको एक संवैधानिक निकाय छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
अख्तियारका आयुक्त भनेको निकै ठूलो जिम्मेवारी भएको पद हो। त्यस्तो पद सम्हालेका ब्यक्तिले ७८ लाख घुस लिएको भिडियो नै बाहिर आयो। आरोप आशंका, होइन बकाइदा अडियो भिडियो, घुसिया आयुक्तज्यूको यत्रायत्रा गाला सहितको बल्याक एण्ड ह्वाइट होइन कलर भिडियो आयो ।
जनताले हेर्नु भन्दा धेरै अघि उहाँले घुस लिएको प्रमाणित हुने भिडियो देशका प्रधानमन्त्री लगायत थुप्रैले हाइडेफिनेशन क्वालिटीमा हेर्नु भएको थियो ।
त्यसको केही सयमपछि कहाँ के सेटिङ मिलेन र त्यो बाहिर आयो, संचार माध्यम मार्फत । पूर्व आयुक्तज्यू घुसिया भएको प्रमाण कहाँ के पुगेन हामी आम मानिसले बुझेनौँ ।
उहाँ शायद बिषेश मान्छे भएर होला बिषेश अदालतले ७५ लाख धरौटीमा पूर्व आयुक्त राजनारायाण पाठकलाई छाडिदिएको छ । यो मुलुकको कानून भित्रै टेकेर र कानूनकै अधिनमा रहेर नै सम्मानित अदालतले उहाँलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
यतिसम्मको एभिडियन्स प्रमाण पुग्दा पनि एउटा घुस खोर थुनिदैन भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने मान्छे गफाडी हो, गफाडी हो, गफाडी हो ।
घुस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो नक्कली हो ? फ्रेममै नअटाउने अनुहार राज नारायाण पाठकको नभएर अरु कसैको एनिमेटेड अनुहार हो ?
आवाज मनोज गजुरेलले क्यारिकेचर गरेर मिलाएका हुन ? के हो त यो ? कानूनका धारा उपधारामा टेकेर यसरी घुस खानेलाई त धरौटीमा छोड्न मिल्छ भने समातिन्छ चाँही को ?
अख्तियारमा बसेर करोडौ करोडौ कमाउनेले ७५ लाख धरौटी तिर्न सक्दैन ? २÷४ करोड त कोट टक्टक्याउँदा झर्छ । अब के घुस लिएको भिडियो प्रमाण दिने सञ्चार कर्मीलाई पाता फर्काउने ।
सरकारले प्रस्ताव गरको मिडिया काउन्सिल विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने राजनारायाण पाठकज्यूले यति बोलेकोमा मेरा विरुद्ध मानहानी मुुद्धा दर्ता गराउनु हुन्छ र मेरो नाक, स्वर, कपाल दारी मन नपाराउने मिडिया काउन्सिलको जागिरे सञ्चार मन्त्री भक्त टिका लगाएको अध्यक्षको सिफारिसमा मलाई १० लाख तिराइन्छ, तिर्न नसके २÷४ बर्ष जेल कोचिन्छ ।
त्यती बेला राजनारायणहरुको विरुद्ध बोल्नु भन्दा पहिले मैले १० लाखको जोहो गर्नु पर्नेछ । सबका मुखमा बुजो लागेको छ, बाँकी छ मिडिया। त्यसका मुखमा पनि बुझो कोचेर भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल १ सय ८० मुलुक मध्ये १ सय २४ स्थानमा छ ।
यो लाजमर्दो ¥याकिङ के नेपाली जनताले गर्दा भएको हो ? यो देशका राजनीतिज्ञले देश भन्दा पहिला १०० प्रतिशत आफूलाई राखेकाले मुलुक भ्रष्टहरुको सूचिमा उकालो चडेको हो ।
यो मुलुकका जनताले दुख पाएकोमा यो देशका राजनीतिज्ञलाई चिन्ता छैन। चिन्ता भए नेकपामा दाहाल, ओली, नेपाल, बामदेव, ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेलको प्राथमिकता शक्तिशाली गुट बनाउनेमा केन्द्रीत हुँदैनथ्यो?
चिन्ता भएको भए रामचन्द्रलाई देख्दा देउवा अन्धमुष्टी, अहिले नै मेघ गर्जनसहित पानी पर्ला जस्तो अनुहार लगाउँदैनथे, सिटौला, प्रकाशमान, रामशरण, विमलेन्द्र आदि भएजतिका नेता मुन्टो बटारेर बस्दैनथे ।